Sony Xperia 1 II ka akwadoro ka ewepụtara ya n'ọnwa a | Gam akporosis
Sony Xperia 1 II ka akwadoro ka ewepụtara ya na ngwụcha ọnwa
Sony ga-aga n'ihu na-emegharị pọtụfoliyo nke smartphones n'afọ a, ọ bụrụ na enwere obi abụọ ọ bụla banyere nke ahụ. N'ezie, ọ na-akwadebeworị ama abụọ maka obere oge, nke bụ 5 Xperia II y Xperia 1 II.
Ekwuru na nke mbụ ga - abụ obere ọkọlọtọ pere mpe nke niile, dịka ọ ga-abata na Qualcomm Snapdragon 865 na ihuenyo dị obere karịa 6 sentimita asatọ, dịka ozi kachasị dị ugbu a nyere nkwụsị. Nke abụọ kwuru mobile Ekwenyela na emechara ya na ahịa na njedebe nke ọnwa Eprel.
A mara ọkwa na Sony Xperia 1 II ga-abata na njedebe nke ọnwa ekwuputala nke ọma. Site na akaụntụ gọọmentị @SonySpain nke ụlọ ọrụ ndị Japan, wepụtara data a. Ihe omuma a, ka o ju otutu ndi mmadu anya, biara na nzaghachi nye onye oru nke welitere ajuju banyere mgbe a ga-eweta ihe nlere di otua.
Enweghị data data ọ bụla banyere Xperia 1 II, mana ekwuru ya Ọ ga-abịa na ihuenyo 4 nke anụ ọhịa 6.5K (QHD +), nke ga-enye ntoputa nke mbu 21: 9. Na mgbakwunye, ngwaọrụ ahụ ga-enyekwa igwefoto azụ nwere okpukpu atọ nke a ga-enwe site na isi sensọ 12 megapixel.
Ekwentị a ga - ejikwa ikpo okwu mobile nke Qualcomm si Snapdragon 865, nke bụ 64 ibe n'ibe, 7 nm ma nwere asatọ cores na na-grouped dị ka ndị a: 1x Cortex-A77 na 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 na 2.42 GHz + 4x Cortex-A55 na 1.8 GHz. Ya mere, Nkwado maka 5G NA na Netwọk NSA agaghị ahụ anya site na enweghị ya na arụmọrụ a dị elu, yana Adreno 650 GPU maka igbu ndị na-achọ eserese na egwuregwu arụmọrụ dị elu.
Nkwenye emere nke Sony Xperia 1 II
A na-echekwa na ọnụ ahịa nke ekwentị ga-agafe ihe mgbochi nke 1.000 euro iji enyere maka ihe dị ka euro 1.200 n'ahịa Europe na nkwenye nke 8/256 GB.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Sony Xperia 1 II ka akwadoro ka ewepụtara ya na ngwụcha ọnwa
A na-emelite Libretorrent na 2.0 yana ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ: nkwado maka nchekwa dị na mpụga, Ihe Ekike 2.0 na ndị ọzọ
IQOO Neo3 ga - abụ ekwentị dị ọnụ ala karịa Snapdragon niile